Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Seychelles » Minista na-ekwe nkwa nkuzi na nlekọta siri ike maka ndị gụsịrị akwụkwọ na Shannon
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Education • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Akụkọ gbasara Seychelles • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Njem nleta Seychelles
Mịnịsta na-ahụ maka mba ofesi na njem nlegharị anya Sylvestre Radegonde ekwela nkwa na kọmitii na-ahụ maka nkuzi ga-eso ndị gụsịrị akwụkwọ kọleji Shannon iji hụ na mmemme ile ọbịa na-emezu ebumnuche ya nke ndị ntorobịa Seychellois na-eto eto na-ejide ọkwa nchịkwa na njikwa n'etiti ụlọ ọrụ njem na Seychelles, ihe ọ na-eme. emebeghị.
Ekwuputara ọkwa a na nzukọ nke abụọ nke 25 Shannon gụsịrị akwụkwọ na Botanical House na Tọzdee, Nọvemba 18, iji nụ aka mbụ ihe kpatara na-erughị 50% nke ndị gụsịrị akwụkwọ na mmemme ahụ ka nọ na ụlọ ọrụ ọbịa ma ọ bụ ngalaba njem na njem. ole na ole n'ime ndị fọdụrụ na-ejide ọkwa nchịkwa. N'ikwu na ọ bụ ezie na Seychelles dị ka mba anaghị efunahụ mgbe onye gụsịrị akwụkwọ hapụrụ ngalaba ile ọbịa iji rụọ ọrụ na nke ọzọ, Minista ahụ kwuru na nke a abụghị ebumnobi e bu n'obi maka mmemme ahụ nke nwere ike imezughị ya.
90 Seychellois gụsịrị akwụkwọ na mmemme nlekọta ile ọbịa nke afọ anọ nke gụnyere afọ atọ na ụlọ akwụkwọ sekọndrị. Njem nleta Seychelles Ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ na otu afọ ikpeazụ na kọleji Shannon dị na Ireland ebe ụmụ akwụkwọ mbụ gara ụlọ akwụkwọ Irish na 2012. Minista ahụ kwupụtara ọchịchọ ya ịnụ site n'aka ndị gụsịrị akwụkwọ na ahụmahụ ha n'ebe ọrụ, ihe ịma aka ndị ha chere ihu, ihe dara mbà n'obi ma manye ha ịpụ. ụlọ ọrụ na-anụkwa aro ha nke ngwọta nwere ike ime iji gbanwee ọnọdụ a.
Ndị gụsịrị akwụkwọ gosipụtara enweghị ohere mmepe na nlekota oru mmemme ọzụzụ, oge na-adịghị ma ọ bụ nke na-adịghị adị otu onye na ndị nlekọta na njikwa iji nyochaa ọganihu na ịchọpụta ọganihu chọrọ yana enweghị njikọ aka site n'aka ndị ndụmọdụ na Ministry of Employment. . N'ime ndị ka nọ na ụlọ ọrụ ahụ, ọtụtụ ndị nwere ihe onwunwe Hilton, ụlọ ọrụ pụtara ìhè maka ịgbaso usoro ọzụzụ nchịkwa.
Ndị gụsịrị akwụkwọ na-ekerịta ịbụ ndị a na-agafe agafe maka ndị ọrụ si mba ọzọ mgbe ohere nkwalite gosipụtara onwe ha, nke ndị nlekọta Seychellois na-aghọta ha dị ka ihe iyi egwu na ọganihu nke onwe ha, ka nọ na ngwugwu ntinye ọkwa mgbe ọtụtụ afọ nke ọrụ gasịrị. Ndị ọzọ na-ekwu maka enweghị atụmatụ ọzụzụ, na-agọnahụ ohere ịmepụta na ịghara ịkwado ha maka nlekọta, na-eme ka ha pụọ ​​na ịrụ ọrụ na mpaghara ndị ọzọ gụnyere ịkụ azụ, mkpuchi, na nchekwa ndị ahịa, n'etiti ndị ọzọ, n'agbanyeghị ịhụnanya ha nwere n'ebe ụlọ ọrụ ahụ nọ.
Ndị ọzọ na-enweta ọzụzụ nkuzi ogologo oge na ọzụzụ nchịkwa nke ANHRD wetara n'ahụ ha na ezinụlọ ha. laghachi na Seychelles ozugbo site na mgbe ahụ, a na-ahapụ ya n'onwe ha n'enweghị ọrụ na nloghachi ha.
Ndị gụsịrị akwụkwọ ole na ole na-akọwa akụkọ ihe ịga nke ọma, na-agba ndị ọzọ ume na ezughị ezu ịmalite, kama itinye aka na itinye uche na mpako na ọrụ ha, ịkwado ụkpụrụ Shannon iji nweta ọrụ na-akwụghachi ụgwọ na ụlọ ọrụ ahụ.
Mgbe ọ nụsịrị akụkọ ndekọ ego nke ndị gụsịrị akwụkwọ, Minista ahụ toro ndị ahụ gụsịrị akwụkwọ maka ihe ha rụpụtara ma kwuo na ọzụzụ afọ anọ ahụ bụ nke siri ike tupu ya ekesaa atụmatụ ya maka ọdịnihu iji hụ na mmemme ahụ mezuru ebumnobi ya nke inwe pasentị dị elu nke Seychellois. na njikwa ọnọdụ.
Iji mee nke a, onye ozi ahụ kwuru na ya ga-eguzobe kọmitii nkuzi ntụkwasị obi, nke a ga-ekwupụta ihe mejupụtara ya mgbe ya na otu nke atọ na nke ikpeazụ nke Shannon gụsịrị akwụkwọ. "Anyị chọrọ ịgbanwe kpamkpam ka usoro nkuzi, ọzụzụ na nlekọta na ụlọ oriri na ọṅụṅụ si arụ ọrụ," Minista Radegonde kwuru. "Anyị anaghị ekwu na ụfọdụ ndị ndụmọdụ anaghị adị mkpa, agbanyeghị, ọtụtụ na-elekọta ọdịmma nke ha. Ha nwere ike ịnwe ndị nke ha chọrọ ijide ọkwa ndị a ma ọ bụ nkà ihe ọmụma ụlọ ọrụ ha nwere ike ịchọ ka onye mba ọzọ jide ọkwa nlekọta ndị a. Yabụ na anyị ga-agbanwe nke a iji tinye ndị mmadụ na kọmitii a ga-eso gị na ndị ọrụ ibe gị rụọ ọrụ n'ezie iji hụ na ị nweta ọkwa ikike ekpebiela. Ị nweghị ike ịgbanwe mkpesa mgbaru ọsọ ka ị na-aga. Anyị ga-enwe atụmatụ ọzụzụ doro anya, atụmatụ ndị ga-anọchi anya, na ịhọpụta ndị mmadụ iji hụ na a na-enyocha ma mejuputa ha. Anyị ga-enyocha ọrụ kọmitii a na ihe na-eme na nguzobe ị na-arụ ọrụ iji hụ na ha na-akwụwa aka ọtọ na nkwa ha. Nzukọ ọganihu otu onye otu ugboro n'ọnwa bụ nke kacha nta. Anyị na ndị gụsịrị akwụkwọ ga na-enwe otu nzukọ ọzọ mgbe nke ahụ gasịrị, anyị ga na-ekwupụta nhazi nke Kọmitii Nduzi na atụmatụ anyị, "o kwuru.
N’ịgba ndị ahụ gụchara akwụkwọ ume ka ha nọgidesie ike, Minista Radegonde kwuru, “Achọrọ m ịgba gị ume, ka m gwa gị ka ị ghara ịda mbà. Ndị pụọ, ndị malitere ọrụ na ngalaba na-enwe obi ụtọ, ụfọdụ ndị malitere azụmahịa nke ha ma ọ bụ malite ọmụmụ ihe ọzọ, Good Luck. Ị ga-enwe obi ụtọ na-eme ihe ị chọrọ ime. Mana maka ndị na-eche echiche ịpụ, achọrọ m ịgwa gị, ka ị ghara ịda mbà ugbu a, jisie ike, anyị ga-edozi ihe. " N'ịkwado amụma imeghe site na ngalaba njem nlegharị anya, o kwadoro na ngalaba njem nlegharị anya ka na-emeghe maka aro sitere n'aka ndị gụsịrị akwụkwọ. "Nnwere onwe ịbịakwute anyị yana gbasara okwu ebe anyị nwere ike inye aka," Minista ahụ kwuru.
N’ịkele ndị gụsịrị akwụkwọ maka itinye oge na nzukọ ahụ, onye isi ode akwụkwọ na-ahụ maka njem nlegharị anya Sherin Francis toro ha maka mmezu ha nwetara n’ịgụ akwụkwọ na nkuzi afọ anọ na-achọsi ike na maka echiche ziri ezi ha kwuputara. “Anyị chọrọ ka echiche gị na aro gị maliteghachi mmemme wee wetara ya ezi ihe okwu ndụmọdụ pụtara. Anyị kwesịrị ịmata ọdịiche dị, ebe ndị anyị na-eme nke ọma, na adịghị ike. A ka ga-enwe ọchịchọ maka ndị mba ọzọ nọ n'ọkwa nchịkwa - agbanyeghị, a ga-enwe ọnụ ọgụgụ dị elu n'ime gị n'ọnọdụ nchịkwa," PS Francis kwubiri.